जात्रै जात्राको टिमले क्लाइमेक्स सिन खिच्नु गरेको ‘स्कुवा डाइभिङ’को फोटो सार्वजनिक
काठमाडौँ । वर्ष २०७६ को पहिलो ब्लकबस्टर चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ टिमले क्लाइमेक्स सिन खिच्नुअघि गरेको ‘स्कुवा डाइभिङ’को फोटो सार्वजनिक भएको छ । फिल्मका मुख्य कलाकार तथा कार्यकारी निर्माता समेत रहेका रविन्द्र सिंह बानियाले उक्त फोटोहरु आइतबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । विस्तृतमा
बाल गायिका महर्जनको ‘हिमाल हाँस्ने मेरो देश’ सार्वजनिक
अभिनयबाहेक साइड बिजनेशबाट पनि गज्जबको कमाइ गरेका बलिउड अभिनेताहरु
प्रकाश सपुतको गलबन्दीविरुद्ध शम्भु राईले उजुरी दर्ता गरे
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रकाश सपुतले गीत चोरेका कुरा उठ्यो
बलिउडमा हिट र फिट सलमान– भाइरल तस्वीर नै प्रमाण
बन्ने भयो प्रभाष स्टारर् ‘बाहुबली’को तेस्रो सिरिज !
सलमानको ‘इनसाल्लाह’ मा आलिया, जम्ला त जोडी ?
धेरै कोशिस गर्दा पनि चुरोटको लत छोड्न नसकेका बलिउड अभिनेताहरु
बलिउडका चर्चित अभिनेताहरुको यस्तो छ साइड बिजनेश
बलिउड । बलिउडमा पछिल्लो समय अभिनय क्षेत्रमा मात्र सिमित नभइ साइड बिजनेश गर्ने ट्रेण्ड बढेर गएको छ । बलिउडका चर्चीत हस्तीहरु नै साइड बिजनेशमा लागिपरेका छन् । स्टार अभिनेता शाहरुख खान रेड चिलिज इन्टरटेनमेन्टका प्रमुख हुन् । उनको यस कम्पनीले भिएफएक्स र एनिमेशन सर्भिसहरु दिदै आइराखेको छ ।
बसन्तको बहार बनी सार्वजनिक
काठमाडौँ । गायक राजेश पायल राई र गायिका चन्द्रकला तामाङको स्वर रहेको बसन्तको बहार बनी बोलको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यी हुन् बलिउडका गुमनाम भिलेनहरु
बलिउडमा कुनै समय केही यस्ता भिलेनहरु थिए जसको डरलाग्दो अभिनय गरेका कारण नै फिल्म सफल हुने गथ्र्यो । आज ती भिलेनहरु गुमनाम भएका छन् ।
बलिउडका डरलाग्दा भिलेनका सुन्दर छोरीहरु
बलिउडमा केही यस्ता चर्चित भिलेनहरु रहे जसलाई आज पनि उत्तिकै सम्मानका साथ नाम लिने गरिन्छ । उनीहरुको अभिनयको आज पनि उत्तिकै चर्चा हुनेगर्छ ।
यस्तो अवस्थामा भेटिइन् अर्पणको ‘घर’ मा अभिनेत्री सुरक्षा
काठमाडौं । फिल्म ‘घर’को पहिलो पोष्टरसँगै रिलिज मिति सार्वजनिक भएको छ । हरर जानरामा अभिनेता अर्पण थापाको निर्देशनमा बनेको ‘घर’ साउन ३ गतेबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउने भएको छ ।
सलमान खानको इन्स्टा अकाउन्टमा अभिनेत्री क्याट्रिनाले किन लाइक र कमेन्ट गर्दिनन् ?
काठमाडौं÷एजेन्सी । क्याट्रिना कैफ सोसल मिडियामा सबै भन्दा बढी सक्रिय रहने अभिनेत्रीहरुमध्ये एक हुन् । आफ्नो फ्यानहरुलाई कसरी खुसी राख्नु पर्छ भन्ने कुरा क्याट्रिनालाई राम्ररी थाहा छ । उनले लगातार आफ्नो ब्यक्तिगत र प्रोफेसनल जीवनको अपडेट सोसल मिडिया मार्फत गर्दै आएकी छन् । साथै उनले अरुको पोष्टमा लाइक र कमेन्ट पनि गर्दै आएकी छन् ।
जब ऐश्वर्यालाई सासु जया बच्चनले अति गरिन्
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चनले आत्महत्या गर्न खाजेको रिपोर्ट बाहिर ल्याएको थियो ।
विवाहपुर्व यी सेलिब्रिटीहरुसँग थियो ऐश्वर्याका लवअफेयर
एजेन्सी । सन् १९९४ मा विश्वसुन्दरी घोषित भएपछि ऐश्वर्या रायको सौन्दर्यको चर्चा झन् बढी भयो । बलिउडमा उनको सौन्दर्यको अझै बयान चल्छ ।
किन जयाले रेखालाई घरमा नै बोलाएकी थिइन्
एजेन्सी । बलिउडमा जब महानायक अमिताभको नाम आउँछ तब रेखा पनि जोडिएर आउने गर्छिन् । उनी जहिले पनि कुनै कार्यक्रममा सिन्दुर लगाएर पुग्ने गर्छिन् उनको चर्चा अमिताभसँग जोडिएर हुने गर्छ ।
जब सैफले करिनाको यस्तो सर्त माने
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरले शाहिदसँग ‘ब्रेकअप’ गरेर १० वर्ष जेठौ सैफसँग बिहे गरेकी थिइन् ।